के आँप खाँदा मोटोपन बढ्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ ? विज्ञहरु के भन्छन् ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized के आँप खाँदा मोटोपन बढ्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ ?...
आँपलाई स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले ‘फलको राजा’ भन्ने गरिन्छ। गर्मी लागेसगैँ आँपको सिजन पनि सुरु हुन्छ। आँप सबैको प्रिय फल पनि हो। हामी स्वादको लागि आँप खान्छौ। आँपको स्वाद मिठो हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै छ। एकातर्फ आँपका थुप्रै फाईदाहरु छन भने अर्कोतर्फ आँपले मोटोपन बढाउँछ भन्ने केही युवाहरूमा गलत धारणा छ ।
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक सचिव आरोग्य भारती अवध प्रान्त वैद्य अभय नारायणका अनुसार आँपमा धेरै तामा हुन्छ। तामालाई एक शक्ति वर्धक पुष्टिकारक र हृदयलाई शक्ति दिने र शीतल पदार्थको रूपमा बुझिन्छ तर आँप अलि मीठो हुन्छ । यसमा अग्नि कफ र भेनस म्याग्निफायर हुन्छ । त्यस्तै, बोटमै पूर्ण रूपमा पाकेको आँपको सेवनले वाथ रोगको समस्या भएको मानिसलाई फाइदा दिनुका साथै यो छिटै पच्छ र यसले शरीरलाई शितलता प्रदान गर्दछ ।
यद्यपि आँप खानुले मोटोपन बढ्ने भन्ने एक भ्रम हो तर खानाजस्तै समान सोचेर सम्झेर सेवन गर्नुपर्दछ । अधिक सेवन हानिकारक हुन सक्छ।
योगाचार्य प्रतिष्ठा माहेश्वरीले भारतमा करिब ५ बर्षदेखि योगा सिकाइरहेकी छिन र योगमा महारत हासिल गरेका छन्। उनी भन्छिन् कि “आँप फल तरल हुन्छ र यसले हाम्रो मांसपेशिहरूमा यति प्रभाव गर्दैन। यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिले नियमित रूपमा योगा गर्नु पर्छ। प्राणायाम जस्तो योगा गर्नाले हाम्रो पाचन प्रणाली स्वस्थ रहन्छ। आँप खाएर मोटो भएन्छ भन्नु भ्रम जस्तै हो।
वरिष्ठ चिकित्सक डा. अशोक कुमार मिश्र एमडी मेडिसिनका अनुसार आँप खानाले यस्तो प्रकारले कुनै समस्या हुने छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो कि यदि तपाईले कुनै पनि कुराको अत्याधिक उपभोग गर्नुभयो भने, त्यहाँ समस्या हुनेछ। आँपमा थोरै कार्बेट पनि हुन्छ, जो एक्स्ट्रा फ्याट बढाउन सक्छ । यस कारण यसको साइड इफेक्ट बढ्न सक्दछ।
फरहीन अली डाइट एक्सपर्ट, पीसीसीएम किंग जर्ज मेडिकल कलेज लखनऊका अनुसार ‘आँप फलफूलका राजा’ हुन्।गर्मि महिनामा हरेक कोही मानिसलाई आँप मन पर्छ । तर्र्र एक मिथक यो हो कि यदि हामीले आँप खायौं भने यसले हाम्रो वजन बढाउँदछ।
वास्तवमा, आँप सही मात्रामा खाएमा यसले तौल बृद्धि गर्दैन । १०० ग्राम आँपमा ६० क्यालोरी हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले अलग अलग समयमा दैनिक १/२ ओटा आँप खाइरहेको छ भने क्यालोरी पनि सही हुन्छ र तौल पनि बढ्दैन।
हामी कोरोनाको जोखिमको बीचमा पनि आँप खान सक्दछौं, किनकि यसमा राम्रो मात्रामा भिटामिन(सी हुन्छ। यो प्रतिरोध क्षमता बढाउने फल हो।
Previous articleशिखर धवनको कप्तानीमा श्रीलंकाको भ्रमणका लागि भारतीय टीमको घोषणा
Next articleअभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाही तथा कलाकार तिलक बस्नेतको समुहमाथी मध्यरातमा आ_क्र_म_ण
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न ६८ करोड बिनियोजन